Mientanentana Izahay Amin’ilay Endrika Vaovao—Antenainay Fa Tahaka Izany Koa Ianareo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2014 22:08 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Svenska, srpski, عربي, Português, Español, English
Ny endrika amam-bikan'ny habaka vaovao dia nosainin'ilay mpanaingo Douglas Savage, sy nataon'ilay kingalahin'ny teknolojia ato amin'ny fikambanana ato aminay antsoina hoe Jeremy Clarke. Nandritra ny fotoana nanaovana ny fanandramana, dia tsara vintana izahay niasa niaraka tamin'ny Oniversiten'i Washington antsoina hoe School of Interaction Design, izay ankasitrahanay tanteraka noho ny nanaovany ny raharaha ho maimai-poana tanteraka. Vondrona telo tsy mifandray no nanao ny fanandramana sy ny fitsapana ilay habaka vaovao, ka nanome ny domberina maventy taminay manondro izay maneha tsara sy izay mila fanatsarana.
Raha mahita fahadisoana na olana ianareo, miangavy ampafantaro anay izany amin'ny alalan'ny famenoana ity taratasy fenoina ity, na manorata amin'ny webmaster@globalvoicesonline.org. Ary raha mbola manana anareo izahay, miangavy mba hevero ihany koa ny manohana anay amin'ny alalan'ny fanolorana fanomezana.